Shirka London Somaliland in ay ka qeyb gashaa waa xaaraan maqdaca | Xeegonews.com
Shirka London Somaliland in ay ka qeyb gashaa waa xaaraan maqdaca
Hargaysa(Xeegonews.com) Shirka bisha May London lagu qabanayo in Somaliland ka qeyb gasho daayoo soo hadal qaad kiisa ayaaba xaaraan maqdaca.
1) Sababta uu xaaraan ku noqdey waxa weeye, shirka mawduuciisu maaha Somalia iyo Somaliland baa kuwada hadlaya ee waxa weeye shir Somalia loo qabanayo.
2) Waxa gudoominaya madaxweynaha Somalia iyo raisal wasaaraha ingiriiska. Kol haduu Hassan gudoominayo goaa’n kiisana isaga iska le oo wax Somaliland u yaalaa ma jirto. Hadii uu Silaanyo iyo wasiirka arimaha dibadu ay isku dayaan na waa (traitors ) khayimiin. Xukunka ku waajibana qof caqli lihi wuu garanayaa.
Silaanyo ha ogaado shicibkii uu ku tuntey in ay tooseen oo aan laga yeeli doonin Somaliland in uu keligii u tashado. Maantaba waataa lagu baaqay talo qaran waana laga shirayaa hadey dowladu ka soo qeyb geleyso iyo hadii kaleba. Waxa aan mar naba shaki lahayn in aan Silaanyo dalka aannu ka talin ee dad gaari ay meesha ku ilaashadaan oo dahabshiil ka mid yahay, wasiirka duulista iyo hawada, Xirsi iyo qaar kale oo badan.
Silaanyo qudbadii shalay kumuu soo darin shirkaa London oo dadku ay aad u daneynayeen halka uu ka taaganyey. Silaanyo waqtiga aad dalkan sii xukumi kartaa waa mudo yar oo kooban oo hadaad term kan dhameysato adaa ku bura sida wixii ka danbeeya laguguma aamini karo Somaliland.
Xirsi inan yar baa Text message igu ceydey buu ku xidhey, wasiirka duulistu lacag xaaraan ah oo sanad guranayey buu yidhi iminka ii xalaaleeye, arimahaa ayaa nagaga kaa filan silaanyow maamul xumidaada iyo tac baan nimadaada.
Silaanyo shicibku wuu ku soo jeestey, aduunkana madaxweyne shicib kiisu ku soo jeestaan maba sii raago.